Mahatratra 4 200 000 ariry ny saran-dalan’ny olona iray hiatrika an’ity lalao ity, ka nahatonga ny Adema hametra ny isan’ireo delegasiona ho any. Hanampy azy ireo ny mpanazatra roa lahy sy ny mpitsabo ary ny filohan’ny klioba.
Ny alarobia ho avy izao no hanainga izy ireo ary hihazo an’i Marseille mialoha ny hamonjen’izy ireo an’i Casablance. « Ekipa goavana no hatrehantsika amin’ity. Ny tsy fahampian’ny hoenti-manana no mahatonga anay hiady mafy amin’ny fiarovana ny voninahitsika.
Farafaharatsiny ady sahala, saingy mila baolina maty any an-tanin’olona no tena ilaina, hoy i Nirina Andrianjoelison na Raniry, mpanazatra ny ekipan’ny seranam-piaramanidina Ivato.